ဆားနငျးပေးရုံဖွငျ့ ရရှိနိုငျမညျ့ အံ့မခနျး ကနျြးမာရေး အကြိုးကြေးဇူးမြား – Daily Feed MM
Admin_John | October 22, 2021 | Healthy | No Comments
ကနျြးမာဖို့ ဆားနငျးစို့….အဲ့ဒါလေးကတော့ ဆားကွမျးလေးနငျးတာပါပဲ…ဆားကွမျး ၂ ပိဿာ ၈၀၀ ကပျြဖိုးဆိုတဈလလောကျ အသုံးပွုလို့ရပါတယျ။
နေ့ စဉျ အ ခြိနျ မှနျ ရခြေိုး ခါနီး တိုငျးဆားနငျးရငျ ကိုယျတှငျးအောငျးပူတှေ ထှကျစသေညျ။ညဘကျ နငျးပုံနငျးနညျးကတော့..မနငျးခငျ ခွထေောကျကို ပေါငျရငျးကစပွီး ရလေောငျးဆေးပါ..ခွောကျအောငျသုတျပါ။
(ဆား ၂ပိသာ ဆို ပိုကောငျး) ဆနျ့တဲ့ ဇလုံကွီးထဲထညျ့ပွီး နငျးပါ…။နာရီဝကျလောကျ ဆကျတိုကျနငျးရငျးနဲ့ခွထေောကျက ခြှေးမြား ထှကျလာတာ တှရေ့ပါမယျ။မိနဈ ၃၀ -၄၀ – ၁နာရီ ကိုယျကနြေပျသညျထိ နငျးပွီးတာနဲ့…
မနငျးခငျ အသငျ့ဆောငျထားတဲ့ ပုဝါနဲ့ခွထေောကျကို ဆားဇလုံထဲ ပှတျခပြွီး ဆားတှပွေောငျအောငျ သုတျပါ။ခွထေောကျကို လုံးဝ(လုံးဝ) ရပွေနျမဆေးရပါ။ခွထေောကျပွောငျတာနဲ့ အိပျယာဝငျပါ။
ပထမနမှေ့ာပဲ နှဈခွိုကျစှာ အိပျပြျောပါမယျ…။အကွောပွေ.. ခွကေဉျြ ထုံနာတှေ ပြောကျကငျး..ခွကှေဲခွငျး မရှိ… ဆံပငျ မကြှတျတော့ပဲနဂိုဆံပငျသနျသူတှေ ပိုပွီး ဆံပငျတှသေနျလာမညျ. ကနျြးမာခွငျးကိုရရှိစမှောပါ။
(၁) မလိုအပျသောအပူအောငျးနသေောအခိုးအငှမြေ့ား ခွဖေဝါးမှတဈဆငျ့ ထှကျသှားနိုငျသညျ။
(၂) ကြောကျကပျတှငျအပူခိုခွငျးမှကာကှယျ၍ ဆီးလမျးကွောငျးကိုလညျးအကြိုးပွုသညျ။
(၃) ကွာကွာနငျးလြှငျခါးမှအပူမြားဆငျးသဖွငျ့ ခါးနာသကျသာစနေိုငျသညျ။
(၄)အထိုငျမြားသူ..ကားမောငျးမြားသူမြားအတှကျ အညောငျးရောဂါ အကွောပိတျ အကွောတငျးခွငျးမြားမှ ကာကှယျနိုငျသညျ။
(၅) မကျြစိအာရုံစိုကျရသူမြား မကျြမှနျတတျရသူမြားအတှကျ မကျြစိကွညျစပွေီး စှဲမွဲလုပျလြှငျမကျြစိဒီကရီကပြွီး မကျြမှနျလှတျစနေိုငျသညျ။
(၆)ဆံပငျကြှတျသူမြား ဆံပငျပါးသူမြား ဆံပငျနှဈခှကှဲခွငျးမြား သကျသာစသေညျ။
(၇) ခေါငျးကိုကျ မကျြရိုးကိုကျ မကျြရညျကသြူမြား မကျြရညျလမျးကွောငျးပိတျသူမြားအတှကျလညျး အကြိုးရှိစနေိုငျသညျ။
(၈) သားအိမျလမျးကွောငျးပိတျ၍ သားသမီးမရသူမြား သားသမီးရစနေိုငျသညျ။
(၉) အမြိုးသားဆီးကြိတျရောဂါရှိသူမြား ဆီးကြိတျကွီးခွငျးမှကာကှယျနိုငျသညျ။ဆားနငျးခွငျးကို နံနကျအိပျယာထ.. ညအိပျယာဝငျ နှဈကွိမျပွုလုပျနိုငျသညျ။ခှကျတှငျ ဆားနှဈပိဿာ အနညျးဆုံးထညျ့ရပါမညျ။ပွီးလြှငျရမေစိုအောငျအုပျထားပါ။
တဈလခနျ့ကွာမှ ဆားအသဈလဲပေးလြှငျရပါသညျ။ဆားနငျး၍ ကုမရသောခေါငျးကိုကျရောဂါ၊ခါးနာရောဂါမြားပြောကျကငျးနိုငျပါတယျ။အကွောပွေ၊ ခွကေဉျြ ထုံနာတှပြေောကျ၊ ခွကှေဲခွငျးမရှိ၊ ဆံပငျ မကြှတျတော့သညျ့ ည အိပျယာဝငျခါနီးတိုငျး ဆားနငျးခွငျး…
နစေ့ဉျအခြိနျမှနျ ည အိပျယာဝငျခါနီးတိုငျး ဆားနငျးခွငျးဆားနငျးရငျ ကိုယျတှငျးအောငျးပူတှေ ထှကျစသေညျ။
နငျးပုံနငျးနညျးကတော့ … မနငျးခငျ ခွထေောကျကို.. ပေါငျရငျးကစပွီး ရလေောငျးဆေးပါ..ခွောကျအောငျသုတျပါ…။ဆား ၁ ပိဿာ (၂ပိဿာဆို ပိုကောငျး) ဆနျ့တဲ့ ဇလုံကွီးထဲထညျ့ပွီး နငျးပါ…။
နာရီဝကျလောကျ ဆကျတိုကျနငျးရငျးနဲ့ ခွထေောကျက…ခြှေးမြား ထှကျလာတာ တှရေ့ပါမယျ…။မိနဈ ၃၀ -၄၀ – ၁နာရီ ကိုယျကနြေပျသညျထိ နငျးပွီးတာနဲ့…မနငျးခငျ အသငျ့ဆောငျထားတဲ့ ပုဝါနဲ့ခွထေောကျကို ဆားဇလုံထဲ ပှတျခပြွီး ဆားတှပွေောငျအောငျ သုတျပါ…
ခွထေောကျကို လုံးဝ(လုံးဝ) ရပွေနျမဆေးရပါ…။ခွထေောကျပွောငျတာနဲ့ အိပျယာဝငျပါ… ပထမနမှေ့ာပဲ နှဈခွိုကျစှာ အိပျပြျောပါမယျ…။
အကွောပွေ.. ခွကေဉျြ ထုံနာတှေ ပြောကျကငျး.. ခွကှေဲခွငျး မရှိ… ဆံပငျ မကြှတျတော့ပဲ…နဂိုဆံပငျသူတှေ ပိုပွီး ဆံပငျတှသေနျလာမညျ. ကနျြးမာခွငျးကိုအားပေးမညျ …။
ကျန်းမာဖို့ ဆားနင်းစို့….အဲ့ဒါလေးကတော့ ဆားကြမ်းလေးနင်းတာပါပဲ…ဆားကြမ်း ၂ ပိဿာ ၈၀၀ ကျပ်ဖိုးဆိုတစ်လလောက် အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။
နေ့ စဉ် အ ချိန် မှန် ရေချိုး ခါနီး တိုင်းဆားနင်းရင် ကိုယ်တွင်းအောင်းပူတွေ ထွက်စေသည်။ညဘက် နင်းပုံနင်းနည်းကတော့..မနင်းခင် ခြေထောက်ကို ပေါင်ရင်းကစပြီး ရေလောင်းဆေးပါ..ခြောက်အောင်သုတ်ပါ။
(ဆား ၂ပိသာ ဆို ပိုကောင်း) ဆန့်တဲ့ ဇလုံကြီးထဲထည့်ပြီး နင်းပါ…။နာရီဝက်လောက် ဆက်တိုက်နင်းရင်းနဲ့ခြေထောက်က ချွေးများ ထွက်လာတာ တွေ့ရပါမယ်။မိနစ် ၃၀ -၄၀ – ၁နာရီ ကိုယ်ကျေနပ်သည်ထိ နင်းပြီးတာနဲ့…
မနင်းခင် အသင့်ဆောင်ထားတဲ့ ပုဝါနဲ့ခြေထောက်ကို ဆားဇလုံထဲ ပွတ်ချပြီး ဆားတွေပြောင်အောင် သုတ်ပါ။ခြေထောက်ကို လုံးဝ(လုံးဝ) ရေပြန်မဆေးရပါ။ခြေထောက်ပြောင်တာနဲ့ အိပ်ယာဝင်ပါ။
ပထမနေ့မှာပဲ နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်ပျော်ပါမယ်…။အကြောပြေ.. ခြေကျဉ် ထုံနာတွေ ပျောက်ကင်း..ခြေကွဲခြင်း မရှိ… ဆံပင် မကျွတ်တော့ပဲနဂိုဆံပင်သန်သူတွေ ပိုပြီး ဆံပင်တွေသန်လာမည်. ကျန်းမာခြင်းကိုရရှိစေမှာပါ။
(၁) မလိုအပ်သောအပူအောင်းနေသောအခိုးအငွေ့များ ခြေဖဝါးမှတစ်ဆင့် ထွက်သွားနိုင်သည်။
(၂) ကျောက်ကပ်တွင်အပူခိုခြင်းမှကာကွယ်၍ ဆီးလမ်းကြောင်းကိုလည်းအကျိုးပြုသည်။
(၃) ကြာကြာနင်းလျှင်ခါးမှအပူများဆင်းသဖြင့် ခါးနာသက်သာစေနိုင်သည်။
(၄)အထိုင်များသူ..ကားမောင်းများသူများအတွက် အညောင်းရောဂါ အကြောပိတ် အကြောတင်းခြင်းများမှ ကာကွယ်နိုင်သည်။
(၅) မျက်စိအာရုံစိုက်ရသူများ မျက်မှန်တတ်ရသူများအတွက် မျက်စိကြည်စေပြီး စွဲမြဲလုပ်လျှင်မျက်စိဒီကရီကျပြီး မျက်မှန်လွတ်စေနိုင်သည်။
(၆)ဆံပင်ကျွတ်သူများ ဆံပင်ပါးသူများ ဆံပင်နှစ်ခွကွဲခြင်းများ သက်သာစေသည်။
(၇) ခေါင်းကိုက် မျက်ရိုးကိုက် မျက်ရည်ကျသူများ မျက်ရည်လမ်းကြောင်းပိတ်သူများအတွက်လည်း အကျိုးရှိစေနိုင်သည်။
(၈) သားအိမ်လမ်းကြောင်းပိတ်၍ သားသမီးမရသူများ သားသမီးရစေနိုင်သည်။
(၉) အမျိုးသားဆီးကျိတ်ရောဂါရှိသူများ ဆီးကျိတ်ကြီးခြင်းမှကာကွယ်နိုင်သည်။ဆားနင်းခြင်းကို နံနက်အိပ်ယာထ.. ညအိပ်ယာဝင် နှစ်ကြိမ်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ခွက်တွင် ဆားနှစ်ပိဿာ အနည်းဆုံးထည့်ရပါမည်။ပြီးလျှင်ရေမစိုအောင်အုပ်ထားပါ။
တစ်လခန့်ကြာမှ ဆားအသစ်လဲပေးလျှင်ရပါသည်။ဆားနင်း၍ ကုမရသောခေါင်းကိုက်ရောဂါ၊ခါးနာရောဂါများပျောက်ကင်းနိုင်ပါတယ်။အကြောပြေ၊ ခြေကျဉ် ထုံနာတွေပျောက်၊ ခြေကွဲခြင်းမရှိ၊ ဆံပင် မကျွတ်တော့သည့် ည အိပ်ယာဝင်ခါနီးတိုင်း ဆားနင်းခြင်း…
နေ့စဉ်အချိန်မှန် ည အိပ်ယာဝင်ခါနီးတိုင်း ဆားနင်းခြင်းဆားနင်းရင် ကိုယ်တွင်းအောင်းပူတွေ ထွက်စေသည်။
နင်းပုံနင်းနည်းကတော့ … မနင်းခင် ခြေထောက်ကို.. ပေါင်ရင်းကစပြီး ရေလောင်းဆေးပါ..ခြောက်အောင်သုတ်ပါ…။ဆား ၁ ပိဿာ (၂ပိဿာဆို ပိုကောင်း) ဆန့်တဲ့ ဇလုံကြီးထဲထည့်ပြီး နင်းပါ…။
နာရီဝက်လောက် ဆက်တိုက်နင်းရင်းနဲ့ ခြေထောက်က…ချွေးများ ထွက်လာတာ တွေ့ရပါမယ်…။မိနစ် ၃၀ -၄၀ – ၁နာရီ ကိုယ်ကျေနပ်သည်ထိ နင်းပြီးတာနဲ့…မနင်းခင် အသင့်ဆောင်ထားတဲ့ ပုဝါနဲ့ခြေထောက်ကို ဆားဇလုံထဲ ပွတ်ချပြီး ဆားတွေပြောင်အောင် သုတ်ပါ…
ခြေထောက်ကို လုံးဝ(လုံးဝ) ရေပြန်မဆေးရပါ…။ခြေထောက်ပြောင်တာနဲ့ အိပ်ယာဝင်ပါ… ပထမနေ့မှာပဲ နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်ပျော်ပါမယ်…။
အကြောပြေ.. ခြေကျဉ် ထုံနာတွေ ပျောက်ကင်း.. ခြေကွဲခြင်း မရှိ… ဆံပင် မကျွတ်တော့ပဲ…နဂိုဆံပင်သူတွေ ပိုပြီး ဆံပင်တွေသန်လာမည်. ကျန်းမာခြင်းကိုအားပေးမည် …။
မူရင်းရေးသားသူ နှင့် ဓာတ်ပုံပိုင်ရှင်များအား လေးစားစွာဖြင့် Credit ပေးပါသည်။
ကွိုကျသလောကျ လညျပငျကွီး ဈေးမကွီးတဲ့ ဆေးနညျး ပေးပါမယျ